Tag: iibka iibka | Martech Zone
Tag: iibka gamification
Arbacada, Maarso 17, 2021 Arbacada, Maarso 17, 2021 Brian Trautschold
Waxqabadka iibku wuxuu muhiim u yahay ganacsi kasta oo koraya. Iyada oo ay ku jiraan koox iib ah, waxay dareemayaan dhiirigelin dheeri ah oo ku xiran yoolalka iyo ujeeddooyinka ururka. Saameynta taban ee shaqaalihii shaqada laga eryay ee ururku waxay noqon kartaa mid la taaban karo - sida wax soo saar la'aanta, iyo tabar darida iyo ilaha dhaqaalaha. Marka ay timaado kooxda iibka si gaar ah, kaqeybgal la'aan ayaa ku waayi karta ganacsiyada dakhli toos ah. Ganacsiyadu waa inay raadiyaan qaabab ay si firfircoon uga qayb galaan kooxaha iibka, ama halista
Tikniyoolajiyadaha dardargelinta iibka B2B hal abuure ConnectLeader ayaa ku dhawaaqay helitaanka qalabkeeda iibinta TopRung iyo aaladda maaraynta waxqabadka. TopRung waxay isticmaashaa awooda tartanka kooxda si ay isugu waafajiso, u korsato una dardar galiso howlaha iibka, sidoo kale wadida korsashada nidaamka iibinta iyo abuurista wada hadalo jiil badan oo horseed u noqda fursadaha dhuumaha. TopRung waxay isticmaashaa awooda tartanka kooxeed, isboorti iyo madadaalo: Isku toosinta, korsashada iyo dardar galinta howlaha iibka Wadida kororka hanaanka iibka Abuur wada sheekeysiyo jiil badan oo hogaamiya kuwaas oo noqda fursadaha dhuunta TopRung waxaa loo magacaabay finalka in